जागिरको लागि कुमारी जब सजिलो - आर्थिक पाटी
आजसम्म पनि नेपालमा राम्रो काम पाइँदैन र पाइए पनि परिश्रम अनुसारको तलब पाइँदैन भन्ने मानसिकता बोकेको जमात ठुलै छ । तर, नेपालमै पनि यस्ता थुप्रै मानिसहरु छन् जसले आफ्नो क्षमता अनुसारको अवसर पाएका छन् र उक्त अवसर तथा त्यसले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधामा सन्तुष्ट पनि छन् । विगत ८ वर्षदेखि यसै गरी धेरैजनालाई कुमारी जबले निःशुल्क र सहज रुपमा जागिर खोजिदिँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा के.एल. दुगडको स्मार्ट अप्लायन्सेज डिपार्ट्मेन्टमा सि.इ.ओ.को रुपमा कार्यरत रोहित रौनियारसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश ː
तपाईले यहाँ काम गर्न थाल्नुभएको कति भयो ?
तपाइले जागिर खोज्ने क्रममा के–के गर्नुभयो, त्यसको बारेमा पनि बताईदिनुहोस न ?
कामको लागि कुमारी जबले तपाईंलाई कस्तो सहयोग अथवा गाइडेन्स गर्यो ?
कुमारी जब मार्फत पाएको रोजगारीले तपाईंको जीवनमा के परिवर्तन ल्याएको छ ?
यो अवसर जुराइदिएकोमा कुमारी जबलाई केहि भन्न चाहनुहुन्छ ?